Abesifazane abaningi banakeka kakhulu isikhumba sabo, zama ukulondoloza ubusha nobuhle bayo. Ngokuvamile, kulezi zinhloso zisebenzisa ama-masks ahlukahlukene ngokusekelwe ngezithelo, okusanhlamvu, imikhiqizo yobisi noma izakhiwo zesitolo ezenziwe ngomumo. Ngeshwa, akusiyo njalo imaski eyenziwe ekhaya ingasiza abesifazane abanesikhumba senkinga. Ukuze uzuze umphumela omuhle kakhulu, ungasebenzisa amavithamini akhethekile, atholakala ngesimo sezixazululo futhi ungafakwa emabhawulini, amakholomu noma amabhodlela.
Imikhiqizo yezimonyo ze-ampoule
Imikhiqizo yokwenza izimonyo ku-ampoules (kufaka phakathi i-vitamin B ebusweni kuma-ampoules) yi-concentrated pack of active substance, lapho izilondolozi nezimo eziqinile zingekho khona ngokuphelele. Ngenxa yobuqotho bayo, ukulungiswa akuhambisani ne-oxidation futhi kugcina ngokuphelele umsebenzi wayo.
Kuzimonyo ze-ampoule, izithako ezisebenzayo zibheke kakhulu ezindaweni eziphakeme. Ngesikhathi esifanayo, inani lezici ezihlukahlukene ezisizayo, ezingase zibe nomthelela obuthakathaka ekwakhiweni okuyinhloko noma zenzeke ekubonakalweni kokuphendula okweqile, ziphansi kakhulu kuma-ampoules. Abaqashi abangekho, okusho ukuthi ama-molecule wezinto ezincane angaphansi kwekhilimu, angena ngokujulile futhi angene ezingxenyeni ze-epidermis. Ngokugcwele amakhemikhumba esikhumba, amavithamini ebusweni ngama-ampoules. I-cosmetologist yamasu - sebenzisa imaski yasekhaya ngokungezwa kwamavithamini e-vithamini e-liquid.
I-Cosmetics, eyenziwa ngama-ampoules, - okunye okungcono kakhulu kunqubo ye-salon. Kungasetshenziswa kalula futhi ngempumelelo ekhaya ukuxazulula izinkinga ezifana nemibimbi, ubuso obungalingani, ukutholakala kwama-pores amakhulu, ama-acne. Isibonelo, i- vitamin B9 ivuselela izinqubo zokuvuselelwa, iqede ukucasula isikhumba.
Ama-ampoules ama-pharmacy angabizi kakhulu aqukethe i-vitamin B. Intengo ayithengi kakhulu, futhi umphumela uyasebenza kakhulu.
Isibuyekezo samavithamini B
Ukulungiswa kwamavithamini amaB b kugcizelela isimo sesikhumba, okwenza kube lula. Ungawasebenzisa ngokwahlukana, futhi ukwamukelwa okunzima kwamaqembu ahlukene amavithamini kungenzeka:
Thiamin - vitamin B1. Isetshenziswa ekwelapheni izifo ezihlukahlukene zesikhumba: i-psoriasis, i-dermatitis, i-eczema, njll. Futhi kuyindlela ephumelelayo yokulungisa izibonakaliso zokuguga;
I-Riboflavin - i-vitamin B2. Kubalulekile ukwandisa ubusha besikhumba nokugcina impilo yayo. Ikhuthaza ukungena kwe-oxygen kuzo zonke izingxenye ze-epidermis. Ngenxa yalokhu, izinga lokunciphisa umzimba likhuphuka, umphumela wesikhumba esinempilo nesikhumba semvelo;
I-Pantothenic acid - i-vitamin B5. Ilungele uhlobo lwe-oily isikhumba, ngokuthambekela kokusheshisa. Iyanciphisa umsebenzi wezingqungquthela ezisabekayo. I-Vitamin B ebusweni ngama-ampoules ifaka isandla ekubuyiseleni umjikelezo ocacile obusweni, ubusheleleze ngisho nemibimbi ejulile;
I-Pyridoxine - i-vitamin B6. Ukuphumelela ekulwa nezifo zesikhumba. Liphiqizwa njengamavithamini ebusweni ngama-ampoules. Iseluleko se-cosmetologist sika-dermatologist ekusetshenzisweni kwalesi sidakamizwa sibheka ukwelashwa kwezifo ze-epidermal, ngoba singabhekana nezinkinga ezinkulu;
I-folic acid - i-vitamin B9. Ukuvikela isikhumba emisebeni ye-ultraviolet, kusiza ukubhekana nokuhlukumeza isikhumba ebusheni;
I-Cyanocobalamin - i-vitamin B12. Kuthuthukisa ukuvuselelwa kwamangqamuzana esikhumba, okuholela ekulahlekelweni kokukhukhumeza, imibimbi ihlanjululwa. I-B12 ema-ampoules ikhuthaza ukuvuselelwa kwesikhumba nokuthuthukiswa kwebala.
Imithetho yohlelo lokusebenza
I-Vitamin B ebusweni ngama-ampoules iyasebenza kakhulu, ngakho-ke kufanele isetshenziswe kahle, ukuze ingabangeli ukulimala ekubukeni kwayo nempilo. Ukwazi izindlela nezindlela zokusebenzisa izixazululo zekhemisi, ungakwazi ukuqeda kalula imibimbi, ukuvuvukala nokunikeza isikhumba ukubukeka okunempilo.
Ukulungiselela amavithamini B: izimiso eziyisisekelo zokusetshenziswa
Isakhiwo esiyinkimbinkimbi samavithamini akusiyo ngaso sonke isikhathi esiwusizo ekuxazululeni izinkinga zezimonyo, ngakho-ke kungcono kakhulu ukusebenzisa ama-monovitamin.
Vula ama-ampoules awahambisani nesitoreji sesikhathi eside. Uma uxhumana ne-oxygen, umsebenzi wamavithamini wehla.
Ngaphambi kokusebenzisa amavithamini emasikini, ubuso kufanele bulungiswe ngokucophelela kule nqubo. Ngesikhumba senkinga, ungasebenzisa ukuhlunga. Uma isomile futhi evamile, kufanele uhlanze kahle ukwakheka futhi usebenzise i-tonic yokuhlanza.
Uma amalungiselelo amavithamini B asetshenziselwa ukuqeda ama-acne, kufanele asetshenziswe kabili ngesonto. Inkambo inezinqubo ezingu-10-15 kuye ngokuthi ubukhulu benkinga buyini.
I-Vitamin isikhumba sokudla
Ukuvuselela ubuso, ungasebenzisa izinhlobo ezihlukahlukene zokudla: i-vitamin C, i-vitamin A eyinkimbinkimbi, ne-E, i-vitamin B. Ukusebenza kwabo kuhlukile: ukwengeza kumaski, ama-cream, ukudla.
Izindlela zokuthuthukisa isikhumba ngamavithamini:
Ukudla okunamandla kwamavithamini ngaphakathi (ama-dragees, amaphilisi, ukumiswa). Uma zithathwa njalo futhi ngokufanele, ngokwemiyalelo, izinkinga eziningi zesikhumba zingagwenywa, ngoba ukudla okunomsoco kuzokwenzeka ngaphakathi.
Amavithamini adayiswa ngokwehlukana futhi angakhululwa ngendlela yamathebulethi, izixazululo zamafutha, ama-capsules. Ukusetshenziswa kwabo kuphakanyiswa, uma kukhona ukuqiniseka okwanele ukuthi lolu hlobo lwevithamini lokudla lulungele uhlobo oluthile lwesikhumba futhi lungakwazi ukuxazulula izinkinga zezimonyo. Zingathathwa noma zengezwe kumaski.
Amaski anamavithamini. Ingathengwa esitolo noma ezenziwe yedwa. Kondla ngokuphelele isikhumba nazo zonke izinto eziwusizo.
Izici zokusetshenziswa kwamavithamini
Ukufeza umphumela oyifunayo, udinga ukusebenzisa izindlela eziningana ngenhla. Nokho, uma kuhlangene, kubalulekile ukucabangela ezinye izici.
Ngaphambi kokusebenzisa amavithamini, kubalulekile ukucacisa umgomo okumelwe uzuze ngokusebenzisa kwawo futhi, ngokuya ngawo, wenze ukhetho lwevithamini elithile.
Akunconywa ukuba uhlanganise amavithamini namavithamini amaningi ukuze ugweme i-hypervitaminosis, eyingozi kokubili umzimba kanye nesimo sesikhumba sombuso.
Kudingeka uzijwayele ngemithetho yesicelo ngaphambi kokuba usebenzise i-vitamin B. Imiyalelo ehlanganiswe nomuthi izosiza ekunqumeni izinhlanganisela ezingafuneki neminye imithi. Isibonelo, i-vitamin B6 ayihambisani ne-ascorbic acid.
Izindleko zama-ampoule amavithamini
Kuye ngenani lama-ampoules nomkhiqizi, i-vitamin B yomuntu ku-ampoules ingabiza ngokwehluke futhi ihluke ngama-ruble angu-50-100. Ungathenga ama-ampoules ngokuqondile kumakhemikhali noma kumawebhusayithi ezitolo ze-intanethi lapho kunikezwa khona ukulethwa.
Intengo iboniswa etafuleni le vithamini B.
Ifomu lokukhishwa, ubuningi
Ampoules 1 ml. №10
I-Pyridoxine, i-vitamin B6 e-ampoules
I-Folic acid, i-B9
I-Pantothenic acid, i-B5
I-1 rub rub.
I-Folic acid + B6 + B12
Amaski okubukeka ubuso
I-mask ne-thiamine ayisizi nje ukugubha imicibisholo emihle, kodwa futhi ukunciphisa amandla okugqoka. Ukupheka, udinga isipuni se-lime uju (uju kufanele ufudumale, ufudumale), ukhilimu omuncu kanye noshizi. Kule nhlanganisela faka i-ampoule eyodwa yamavithamini B1 no-B12. Khona-ke kufanele ixutshwe kahle futhi ifakwe ebusweni. Ngemuva kwemizuzu engu-20, hlambulula ngamanzi afudumele.
Gaya ama-oats (amabili wezipuni) exutshwe ne-tbsp eyodwa. Spoon of uju kanye yogurt (akukho izithasiselo). Konke uhlanganise ngokucophelela uphinde uthele isipuni 1 se-vitamin B1. Ingxube ehlanganisiwe isetshenziswa ebusweni obuhlanzekile imizuzu engu-25, bese ugeza ngamanzi aphephile.
Imaski yesikhumba senkinga
Leli kadakamizwa kufanelekile ukwelashwa kwemfucumfucu esikhumba. Ku-1 tbsp. Isiphuzo soju lwamanzi sisongeza isigamu se isipuni ukhilimu omuncu (mhlawumbe kunomqondo omncane we-fat). Faka bese ufaka isipuni 1 samaji kalamula kanye ne-vitamin B6 buloule. Faka isicelo kuzo zonke izindawo zobuso. Ubude besicelo - imizuzu engu-30. Susa imaski nge-napkin elula, hlambulula ngamanzi afudumele.
Ukuze ufudumele i-kefir (izinto ezingu-2 ze-spoon), engeza uju (kungcono, uma kuzoba uketshezi, ithisipuni elilodwa) nengxenye yepuniji yamanzi kalamula. Thela i-ampoule 1 ye-vitamin B12. Phatha isikhumba ngengxube etholakalayo. Vumela ukuthi uhlalise imizuzu engu-20. Geza ngamanzi afudumele.
Isicelo sama-ampoule amavithamini
Ngaphezu kokusebenzisa i-vitamin B njengengxenye yamaski ebuso, ungasebenzisa indlela eqondile yokusebenza. Ukuze wenze lokhu, kumele uqale uhlanze isikhumba, bese uvula i-buloule bese usebenzise okuqukethwe kwayo emigqeni yokusikhipha ubuso. Ngemuva kwalendlela, kufanele ulinde kancane ukunikeza amavithamini ukuze uyithole. Khona-ke, sebenzisa ukhilimu ofanelekile wesikhumba sosuku (ubusuku noma ubusuku).
Inani lamavithamini ku-ampoule eyodwa ibalwa kwesicelo esisodwa. Kodwa kunezimo ukuthi isamba esithile sishiywe, ungayilondoloza kuze kufike isicelo esilandelayo. Ukuze wenze lokhu, vala ngokucophelela i-ampoule evuliwe ngepotton pad bese ugcina endaweni epholile. Ukuze uthole umphumela omuhle, sebenzisa amavithamini kangcono ngaphambi kokulala, usebenzisa i-ayisikhilimu ebusuku. Ebusuku, izinqubo zesikhumba somzimba zisebenza ngokukhethekile. Ama-Serum eklanyelwe ukuvikela emiphakathini eyingozi yemvelo kufanele isetshenziswe emini.
Ukudlula "Indlela uthole umakhelwane: tycoon Holiday" - Secrets
Imoto entsha ehlanganisiwe "I-Operi Meriva"
Sebenza on the Internet: kuphi futhi kanjani ungakwazi ukuthola imali kwi-inthanethi